Dziviriro yedata - Hands Off!
Paws Off - Stop Child Abuse isangano rekudzidzisa nekudzivirira kubva mukushungurudzwa kwevana pabonde. Tinoda kumhan'arira vanhu vese kuziva zviitiko zvekushungurudzwa kwevana uye kupondwa kwevana pamwe nevatengi vemavhidhiyo ekushungurudzwa kwevana. Naizvozvo isu tiri kutsvaga vanozvipira kubva kumativi ese epasi kuti vaunze aya ese kesi pamepu.
Ndokumbira kuti unyore kuTumira Nyaya uye ubatsire kuratidza pasirese kuti kune vakawandisa vanorwara nevanhurume pamwe nemasangano evana vanoshungurudza vana pabonde uye kuti tinofanirwa kudzivirira vana vedu kwavari.
© 2021 Maoko--off.org . Zvakanaka zvakachengetedzwa.